ovy voa - magazine "Potato System"
Tena Label ovy
Kolomenskiye Semyon LLC dia toeram-pambolena voa manokana amin'ny fambolena ovy voa voalohany sy elite. Ny orinasa dia ao amin'ny distrikan'i Kolomensky ao amin'ny faritr'i Moskoa. ...
OVY VOA: AO AMIN'NY ONJAKA MISY FITADY
Mitombo ny tahan'ny famokarana ovy voahavaozina any amin'ny faritra Novgorod
Tamin'ity taona ity, ny toeram-pambolena voa ao amin'ny faritr'i Novgorod dia namokatra 443 arivo minitrauber ovy. Izany dia avo 1,2 heny noho ny teo aloha. ...
Ny hoavin'ny fambolena ovy any Georgia dia an'ny tantsaha tanora
Nanomboka namboly ovy niaraka tamin'ny ray aman-dreniny i Giorgi Khitarishvili tamin'izy dimy taona. Nipetraka tany Valai ny fianakaviany avy eo, ...
Nikasa ny ho lasa mpamokatra ovy fahatelo lehibe indrindra eran-tany i Nizeria amin'ny taona 2025
Araka ny filazan'ny minisitry ny Fambolena sy ny Fampandrosoana ambanivohitra any Nizeria, Mustafa Baba Shekhuri, dia hiditra amin'ny firenena telo voalohany mpamokatra ovy ny firenena ...
Hevitra NVWA: Tsy misy bakteria manimba hita ao anaty ovy voa avy any Holandy
Tamin'ny 1 Novambra, namoaka vaovao ny tranokalan'ny gazetiboky "Potato System" fa ovy voa 228 taonina no nogiazana tao Kazakhstan ...
Agrotechnopark ho an'ny famokarana ovy dia hiseho any Chuvashia
Iray amin'ireo tetikasa enina an'ny paikadin'ny repoblika eo anoloan'ny repoblika ny tontolo iainana intersectoral "Agro Breakthrough", natao mba hisy fiantraikany tsara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao Chuvashia. Amin'ny...
Fijery momba ny indostria